Ungalwakha Futhi Ulukhulise Uhlu Lwe-imeyili | Martech Zone
UBrian Downard we-Eliv8 wenze omunye umsebenzi omuhle kakhulu kuloluhla lwe-infographic nohlu lwakhe lokuhlola oluku-inthanethi (thwebula) lapho afaka khona lolu hlu lokuhlola lokukhulisa uhlu lwakho lwe-imeyili.
Kade sisebenza uhlu lwethu lwe-imeyili, futhi ngizofaka ezinye zalezi zindlela:
Dala amakhasi okufika - Sikholelwa ukuthi ikhasi ngalinye yikhasi lokufika… ngakho-ke umbuzo uwukuthi unayo yini indlela yokungena kuwo wonke amakhasi esayithi lakho nge-desktop noma ngeselula?
Sebenzisa Izipesheli Zokuqukethwe Zokungena - Qiniseka ukuthi lokhu kungumnikelo obalulekile futhi ofanele. Ukunikeza i-iPad kungavele kuthonye ithoni labantu abakhetha ukungena futhi bandise imibiko yakho ye-SPAM lapho bethola i-imeyili engahambelani.
Faka Amafomu Okungena KuSayithi Lakho - Sakhe amafomu wokungena njengengxenye ye- CircuPress ngoba besazi ukuthi bagxeka kanjani. Manje sandisa ukusebenza kwabo!
I-Traffic eqondile enezingcingo ezenziwa - Tshela abantu okufanele bakwenze ngokulandelayo, ubakhombise ukuthi kungani kumele bakwenze, nokuthi bakwenze kuphi.
Sebenzisa Ubufakazi Bomphakathi kwikhophi lakho - Izilinganiso nezibuyekezo zakha ukuguqulwa kokuthembana nokwethembana.
Qoqa Ama-imeyili Esitolo Sakho - Isitolo, umcimbi, indawo yokudlela, isitolo sekhofi… nomaphi lapho ungaqoqa khona i-imeyili usebenzisa imvume yomuntu, kwenze!
Sebenzisa Ividiyo Yokuchaza - Uma isithombe sibiza amagama ayinkulungwane, ividiyo echazayo ibiza izigidi.
Sebenzisa ukuthuthukiswa kokuqukethwe - Ukuklolodela okunye okuqukethwe kuyindlela enhle yokuvumela umuntu osevele wangena ukungena!
Thepha Emandleni Empendulo - Thatha impendulo bese usayina labo bantu!
Dala amavidiyo anamasango eWistia - I-Wistia inamanye amathuluzi amahle wokuguqula isizukulwane sevidiyo nokuhola - wasebenzise!
Bona ngeso lengqondo iTraffic Yesiza Sakho - Abantu bazulazula kanjani kusayithi lakho futhi ubacela ukuthi bangene kuleyo nqubo?
Sebenzisa ikhophi enenzuzo ecebile, esuselwe esenzweni - Misa ngezici esezivele zikhona, khombisa abantu izinzuzo!
Yenza okuthunyelwe kutholakalele ukulanda - Ungamangala ukuthi bangaki abantu abasayithanda leyo khophi eqinile yendatshana ongayigcinela kamuva.
Qoqa Ama-imeyili Abaphawuli - Bathembisene umshado, manje sekuyisikhathi sokubabuyisa nge-imeyili.
Sebenzisa Amafomu wokuPhuma kweNhloso yokuPhuma - Leli yithuba lakho lokugcina lokuthatha leso sivakashi esisha kusayithi lakho, lisebenzise!
Hamba umncintiswano - Njengezinhlinzeko zakho, qiniseka ukuthi umncintiswano wakho uhambelana nezithameli zakho futhi unikeza inani.
Sheshisa Iwebhusayithi Yakho - Amawebhusayithi asheshayo abiwa, abalwa futhi aguqula izivakashi kangcono.
Hlola i-A / B Konke - Uma ungaliphinda kabili izinga lakho lokungena, ubungeke? Ukuhlolwa kwe-A / B kuzokunikeza lelo thuba.
I-Slideshare Traffic eqondile - I-Slideshare yindlela emangalisayo yokwabelana ngobungcweti bakho… ukushayela labo bantu ubuyele kusayithi lakho ngama-hotlinks kusethulo sakho.
Sebenzisa Amakhadi Wokuhola we-Twitter - AmaTweets andiza futhi awafundi kangako… kepha izithombe ziwudlulisa ngokushesha umyalezo futhi zinikeze nethuba lokuthwebula umfundi.
Phendula imibuzo ku-Quora - Nikeza inani futhi bazofika!
Tags: ukuhlolwa kwe-abAma-Analyticsshayela esenzweniubiza isenzoqoqa ama-imeyiliama-imeyili okuphawulaokuqukethwe okunikezwayoukuthuthukisa okuqukethweikhophithwebulaInhloso yokuphumaividiyo echazayoimpendulokhulisa uhlu lwama-imeyiliamakhasi okufikaokuqukethwe kokukhetha ukungenaamafomu wokungenaquoraithrafikhi yesayithii-slideshareubufakazi bezenhlalakahleamakhadi wokuhola we-twitterzibone ngamehlo engqondoisivinini sewebhusayithiWisdomtiaikhophi yokubhala
Sep 6, 2015 ngo-5: 25 PM
Sawubona Doug, ngiyabonga futhi ngokwabelana nge-infographic yami! Ngikujabulele kakhulu ukufunda imibono yakho ngecebo ngalinye.
Sep 6, 2015 ngo-8: 24 PM
Nina bantu nihlala niveza ama-infographics amahle, Brian! Futhi bengizozihlukanisa njenge- an i-infographic snob. Ngazise noma nini lapho ushicilela eyodwa!